China Akwụkwọ pulp ihicha akụrụngwa akwa njupụta / Centri-Cleaner maka akwụkwọ na pulp mill factory na suppliers | YUNFENG
Akwụkwọ nhicha nhicha akụrụngwa akwa njupụta / Centri-Cleaner maka akwụkwọ na pulp mill
High njupụta pulp ájá remover, centricleaner pulp na akwụkwọ igwe High njupụta Cleaner iwebata High njupụta Cleaner tumadi etinyere iji wepu nile di iche iche nke adịghị ike na akwụkwọ pulp, dị ka staples, nkume, iko, wdg Volol pullow inflow ulo, eddy ikike dị ike na obere nsogbu mpaghara subarea bụ doro anya. Nke a na-eme na-anabata na adịghị iche iche juputara.Wear eguzogide ceramik cone, ogologo ọrụ life.Specially mere ogologo cone nwere obere taper n'akuku na ezi ihicha rụọ ọrụ nke ọma ...
High njupụta pulp ájá remover, centricleaner pulp na mpempe akwụkwọ
Iwebata njupụta dị elu dị elu
Igwe njupụta dị elu tumadi etinyere wepu nile di iche iche nke adịghị ike na akwụkwọ pulp, dị ka staples, nkume, iko, wdg Volol pullow inflow ulo, eddy ike bụ ike na ala nsogbu mpaghara subarea bụ doro anya na .Nke a na-eme na-anabata na adịghị ọcha iche juputara. seramiki cone, ọrụ ogologo ndụ.Ese ogologo ogologo cone nwere obere taper n'akuku na ezi nhicha arụmọrụ.Equ akwa na PLC na-achịkwa kọfị, adaba ma dịkwa mfe ijikwa, ezughị oke adịghị ọcha.
Njirimara nhicha dị elu
Igwe njupụta dị elu bụ usoro dị mfe, na-ekpuchi obere mpaghara, ikike dị ukwuu, dị mfe ịrụ ọrụ, anaghị egbochi slagging, yana nnukwu ịdị ọcha nke dị elu.Ọrụ pulp kwesịrị naanị site na igwe otu oge, na-enweghị ọdụ nhazi ihe eji eme ihe, eriri eriri bụ efu , cone bụ eyi, ndụ ogologo, enweghị ntụgharị, achọghị mkpali. Awụnyere na slurry iga usoro nwere ike nweta mmetụta nke deslagging.
High anọgidesi ike centricleaner maka akwụkwọ pulp igwe tumadi etinyere iji wepụ nile di iche iche nke oké adịghị na akwụkwọ pulp, dị ka staples, nkume, iko, wdg Volute pulp inflow ulo, eddy ike bụ ike na ala nsogbu mpaghara subarea bụ doro anya. Nke a na-eme anabata. na adịghị ọcha na-ekewapụ kpamkpam.
Eyi eguzogide ceramik cone, ogologo ọrụ life.Specially mere ogologo cone nwere obere taper n'akuku na ezi ihicha arụmọrụ.Equ akwa na PLC akara kabinet, adaba na mfe ịchịkwa, zuru ezu orùrù adịghị.
Nke gara aga: elu-anọgidesi abụọ-mmetụta pulp Cleaner nke n'efu akwụkwọ imegharị ihe maka iji igwe / akwụkwọ
High Uche Ogwe
Akwa-agbanwe agbanwe Cleaner
Igwe njupụta dị elu
High njupụta pulp ájá remover
Nnukwu Sand Sand Remover
Akwụkwọ ihicha ngwá